တိုက်ခိုက်သောခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဝံ့သည်။ | Dare to BeaFighting Christian! | Real Conversion
ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၀ ) ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
မကြာသေခင်က ကမ္ဘာ့မဂ်ဇင်းတစ်ခုတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် ဆောင်းပါး တစ်ခုကို ဖတ်မိသည်။ ၎င်းမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကျောင်းတက်နေရင်း ဧဝံဂေလိ အသင်းသားဖြစ်လာသည့် တရုတ်ကျောင်းသားများအကြောင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တရုတ် နိုင်ငံသို့ပြန်ရောက်ကြသောအခါတွင် အိမ်အသင်းတော်အများစုနှင့်လိုက်လျောညီထွေနိုင်မှုမရှိ သည့်အကြောင်းလည်းပါသည်။ ဧဝံဂေလိအသင်းသားဖြစ်လာပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်သွားသော မိန်းကလေးတစ်ဦးက သူတို့ကြုံတွေ့သောပြဿနာကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ သူမက “အိမ်အသင်း တော်တစ်ခုကို အလည်အပတ်သွားခဲ့သည်၊ သို့ရာတွင် သူတို့ကို ကျွန်ုပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံကို ပြောပြဖို့ အရမ်းခက်ခဲပါသည်။ သူတို့သည် ဆက်စပ်မှုမပြုကြပါ။ ကျွန်ုပ်က အထီးကျန်ဆန် လွန်းသည်ဟု ခံစားခဲ့ရသည်” ဟု ဆိုခဲ့သည်။ သူမ၏အတွေ့အကြုံမှာ စံနမူနာတစ်ခုသာဖြစ် ကြောင်း ဆောင်းပါးက ဆိုသည်။ အမေရိကန်ပြည်တွင် ဧဝံဂေလိအသင်းသားဖြစ်လာသောသူ များစွာတို့သည် ထိုနေရာတွင်ရှိသော အိမ်အသင်းတော်များတွင် တွေ့ရှိသောအရာများဖြစ် သည့် မိသားစုဖိအား၊ အလုပ်အစီအစဉ်၊ နှင့်မတူညီသောအသင်းတော်ထုံးတမ်းစဉ်လာများအ တွက် ပြင်ဆင်မှုမပြုကြပါ။ “နောက် နှစ်နှစ်ကြာလာသောအခါ ဧဝံဂေလိအသင်းသားများဖြစ် လာကြသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဘုရားကျောင်းသို့မတက်ကြ တော့ပါ။” ( ကမ္ဘာ့မဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇၊ စာ- ၄၈ ) “သူတို့သည် တရုတ်အသင်း တော်များဆီသို့သွားကြသောအခါ ၎င်းတို့၏မျှော်လင့်ချက်များသည် ရိုက်ချိုးခြင်းခံရစမြဲဖြစ်ပါ သည်။ အချို့တို့သည် လိုအပ်ချက်ပေးကမ်းခြင်းမရှိရာနေရာများတွင် လေအေးပေးစက် သို့မ ဟုတ် အသင်းတော်အဆောက်အဦးပင်မရှိပေ။”
တချိန်တည်းတွင် တရုတ်ပြည်တွင်သင်းအုပ်လုပ်သောသူများက ဤသို့ပြန်လာသော လူငယ်များက အသင်းတော်၏အခွင့်အာဏာကို စောဒကတက်ပြီး စိန်ခေါ်ကြသည်ကို တွေ့ရှိ လာကြသည်။ သူတို့က တရုတ်ပြည်တွင်ရှိသော အိမ်အသင်းတော်များကို အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုရှိ ၎င်းတို့တက်ခဲ့သောဘုရားကျောင်းများကဲ့သို့ ဖြစ်စေလိုကြသည်။
ဤအရာမှာ အလွန်ပင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင် အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် တရုတ်အိမ်အ သင်းတော်ကို စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ဤတရုတ်ခရစ်ယာန်များသည် ကွန်မြူနစ်များ၏ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းတွင် အသက်ရှင်ကြပါသည်။ တရုတ်အိမ်အသင်းတော် အတော်များများတွင် စစ် မှန်သောနိုးကြားမှုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
အမေရိကန်အသင်းတော်ရှိကလေးများသည် တရုတ်ကလေးများက အိမ်အသင်း တော်တွင်ရှိသောစိတ်ထားကဲ့သို့ အလေးအနက်ထားသောစိတ်ထား၊ နိုးထမှုစိတ်ထားဖြင့် ချစ် ခြင်းကိုပြသသင့်ဟန်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့မရှိကြပါ။ အမေရိကန်ဧဝံဂေလိများသည် အိမ် အသင်းတော်ရှိ တရုတ်ကလေးများကို ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် အရုံစူးစိုက်ကာ “မပေါင်းသင်း” ကြ ပေ။“နောက် နှစ်နှစ်ကြာလာသောအခါ ဧဝံဂေလိအသင်းသားများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဘုရားကျောင်းသို့မတက်ကြ တော့ပါ။”
အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ လေပေးစက်လည်းမရှိ။ ဆင်းရဲချို့တဲ့ သောကလေးသူငယ် လေးဖြစ်ပါသည်။ ။ ကောင်းမွန်သောအသင်းတော်အဆောက်အဦးလည်းမရှိပါ။ ဆင်းရဲချို့တဲ့ သောကလေးသူငယ်ဖြစ်သည်။ ၄င်တို့၏လိုအပ်ချက်များကို အဘယ်သူမျှတာဝန်ယူထားသူမရှိ ပါ။ ကျွန်ုပ်၊ အကျွန်ုပ်၏ ဆင်းရဲချို့တဲ့သောကလေးသူငယ်များဖြစ်ပါတကား။ ကျွန်ုပ်တို့ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ရှိသော ဧဝံဂေလိများအလားပင် အရာခပ်သိမ်းကို ပေးစေလိုပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က စောတကတက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျက်စီးသောအမေရိကန်ဧဝံဂေလိ များကဲ့သို့ အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တို့၏အခွင့်အာဏာကို စိတ်ခေါ်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် အရေးကြီးသောဆုတောင်းအစည်းအဝေးတွင် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြပါ။ သူတို့သည် အဘယ့်ကြောင့် များစွာ၊ ကျယ်လောင်စွာ ဆုတောင်းပဌနာပြုကြပါသနည်း။ အဘယ့်ကြောင့် ကြိုးကြိုးစားစား၊ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင္ ဟောပြောခြင်းကို ပြုကြပါသနည်း။ အမေရိကန် တွင်ရှိသောသူများကဲ့သို့ သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့က ကောင်းမွန်စွာ မပြုနိုင် ကြပါ။
အမေရိကန်တွင် သင်ကြားမှုခံယူသည့် တရုတ်ဧဝံဂေလိအဖွဲ့သည် မည်သည့်အချက် တွင် မှားယွင်းခဲ့ကြပါသနည်း။ ကမ္ဘာ့မဂ္ဂဇင်းတစ်ခု၏ဖော်ပြချက်တစ်ခု၌ မှားယွင်းမှုတစ်ခုမှာ အမေရိကန်တွင် ပညာသင်ယူပြီး တရုတ်ပြည်ပြန်လာသောကျောင်းသား ၁၀ဦးတွင် ၈ဦးက ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကို ကောင်းမွန်စွာဟောပြောတတ်ခြင်းမရှိဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ၁၀ ဦးတွင် ၈ ဦးက ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကို ကောင်းမွန်စွာ မသိရှိကြပေ။သူတို့ သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များတွင် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြေပ။ ၎င်းမှာ အမေရိကန်ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များတွင် အဓိကလိုအပ်သောအရာဖြစ်ပါသည်။ ၁၀ ဦးတွင် ၈ဦးမှာ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များမဟုတ်ကြပေ။ တရုတ်အိမ်အသင်းတော်များတွင် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များကို မနှစ်သက်ကြသည်မှာ အံ့ဩစရာမဟုတ်ပေ။ ဒုတိယအချက်အ နေဖြင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိဘဲ အခြားအသင်းတော်ဝင်များနှင့်သာမိတ် ဿဟာယပြုကြသည်။ သင်သည် ဘုရားကျောင်းသို့သွားရသည့် တစ်ခုတည်းသောအကြောင်း ရင်းမှာ မိတ်ဿဟာယဖွဲ့ရန်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ကြာရှည်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည် ယေရှုခရစ်နှင့်စစ်မှန်သောမိဿဟာယဖွဲ့ခြင်းမရှိလျှင်၊ သင်သည် ဘုရားကျောင်းကို အနှေးနှင့် အမြန်စွန့်ခွါသွားပေလိမ့်မည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့် အသင်းတော်၌ ဘုရားသခင်ကို အစေ ခံရန်အတွက် သွန်သင်ပေးထားခြင်းမျိုးမရှိပါ။ သူတို့သည် အခြားသူများကိုအစေခံခြင်း၊ သူတို့ ကို ခရစ်တော်ထံပို့ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ ဂရုစိုက်မှုကိုရှိစေလိုကြပါသည်။
ဤအရာပြသ သမျှသောအရာမှာ လူငယ်တို့၏ အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ခရစ် တော်အတွက် ချစ်သောစိတ်နှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကျဆုံးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာကို ကျွန်ုပ် တို့အနေဖြင့် သိနှင့်ပြီးသား မဟုတ်ပေဘူးလား။ အမေရိကန်တွင်ပေါ်ထွန်းသော ဧဝံဂေလိများ က “သင်ကလည်း၊ ငါသည် ဥစ္စာရတတ်၏။ ဘဏ္ဍာများကို ဆည်းဖူးပြီ။ တစုံတခုကိုမျှ မလိုဟု ပြောဆို၍၊ ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်း၊ သနားဘွယ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ မျက်စိကန်းခြင်း၊ အဝတ်အ ချည်းစီးရှိခြင်းဖြစ်သည်ကို မသိပါတကား။--- ထိုသို့ အဧမဟုတ်၊ အပူမဟုတ်၊ နွေးရုံရှိသော ကြောင့် ငါ၏ခံတွင်းသည် သင့်ကိုထွေးလုပြီ၊” ( ဗျာ ၃း ၁၇၊ ၁၆ ) ဟုဆိုကြသည်။ ဤဝါကြွား သည့် အမေရိကန်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား ခရစ်တော်က “ငါ၏ခံတွင်းမှ သင့်ကိုငါ ထွေးလုပြီ” ဟု ဆိုလိမ့်မည်။ ထိုအရာက ဒံယေလစာအုပ်တွင် လူငယ်လေးဦးဆီသို့ ခေါ် ဆောင်သွားပါသည်။ ဒံယေလ၊ ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အဗေသနေဂေါ တို့သည် ၎င်းတို့နေအိမ်မှ မိုင်ပေါင်း ၁၅၀၀ အလှမ်းဝေးလျက်နေခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များ သာဖြစ်ကြပြီး အိမ်မှနေ၍ ရုပ်တုကိုးကွယ်ရာ ဗာဗုလုန်မြို့သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါသည်။ သူတို့ သည် တရုတ်ပြည်သို့ပြန်လာသည့် အားနည်းသောနယူဧဝံဂေလိသမားများကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါသ လား။
သူတို့လူငယ်လေးဦးသည် စစ်သုံ့ပန်းအနေဖြင့် ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသော ဟေဗြဲလူ ငယ်များသာမဟုတ်ပါ။ ဒံယေလ ၁း ၃ ကို ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။ ၎င်းသည် Scofield Study Bible တွင် စာမျက်နှာ ၈၉၈ တွင် တွေ့ရပါသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်ကို ဖတ်ရှုမည်ဖြစ်သောကြောင့် အား လုံးမတ်တပ်ရပ်ပေးကြပါရန်လိုအပ်ပါသည်။
“ထိုအခါ ရှင်ဘုရင်သည် မိန်းမစိုးအုပ် အာရှပေနတ်ကိုခေါ်တော်မူ၍ မကောင်းသောလက္ခဏာကင်းလျက်၊ လှသောအဆင်းသဏ္ဍာန် နှင့်ပြည့်စုံ၍၊ ကောင်းသောဥာဏ်နှင့်တကွ အထူးထူးအပြားပြား သောအတတ်ပညာများကို လေ့ကျက်၍၊ နန်းတော်၌ အမှုထမ်း ခြင်းငှါ တတ်စွမ်းနိုင်သောလူပျိုတို့ကို ကုသရေလမင်းမျိုးမင်းသား ထဲကရွေးကောက်၍၊ ခါလသဲဘာသာအတတ်ကိုသင်စေဟု အမိန့် တော်ရှိ၏။” ( (ဒံယေလ ၁း ၃ )
အပိုဒ်ငယ် ၆ ကိုလည်း ကြည့်ရှုကြပါစို့။
“ထိုသူတို့တွင် ယုဒအမျိုးသားဒံယေလ၊ ဟာနနိ၊ မိရှေလ၊ အာဇရိ တို့သည် ပါကြ၏။” ( ဒံယေလ ၁း ၆ )
ထိုင်နိုင်ပါသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်များက သုံ့ပန်းအဖြစ် ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသော ကုသရေလလူငယ် များစွာရှိသည်ကို ပြသသည်။ သို့ရာတွင် ဤလူငယ်တို့သည် အကောင်းဆုံးသောသူများဖြစ်ကြ ပါသည်။ သူတို့သည် ပညာရှိများ၊ ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင် နေဗုခဒ်နေဇာ၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ် လာကြစေရန် သုံးနှစ်သုံးမိုး သင်ကြားပေးခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ ဒံယေလသည် သူတို့ထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အခြားသုံးဦးမှာ ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အာဗေသနေဂေါတို့ပင်ဖြစ် ကြပါသည်။ သူတို့အားလုံးသည် ထူးချွန်ထက်မြက်သူများ၊ အသိပညာဗဟုသုတရှိသူများ၊ သိပံ အတတ်ကိုကျွမ်းကျွင်သူများ၊ ဘာသာစကား၌ ထူးချွန်သူများဖြစ်ကြပါသည်။
သို့ရာတွင် ထိုလူငယ်လေးဦးအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ချို့ရှိပါ သည်။ သူတို့သည် ဘုရင့်အစားအစာ၊ သို့မဟုတ် ဘုရင်သောက်သောစပျစ်ရည်ကိုပင် မသုံး ဆောင်လိုကြပါ။ သူတို့သည် အစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မောရှေ၏ပညတ်တရားကို စောင့်ထိန်းသူများဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့သည် ပြီးစီးအောင် လိုက်နာကျင့်သုံးကြသည်။ သူတို့ သည် ဘုရားမဲ့တိုင်းပြည်တွင် ဘုရားသခင်အတွက် ရပ်တည်နိုင်ရန်မှာ ခက်ခဲလွန်းလှသည်။ အ ပိုဒ် ၈ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ “ဒံယေလက ရှင်ဘုရင်၏စားသောက်ဖွယ်ရာများ ( စားစရာ ) နှင့်စပျစ် ရည်ကို သုံးဆောင်ခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို မဖျက်ဆီးမည်အကြောင်း စိတ်နှလုံးတွင် ကြံစည်ခဲ့ သည်” ဟုဆိုပါသည်။ အခြားသောသူသုံးဦးတို့ကလည်း ထိုသို့ပင် ကြံစည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ သည် ဘုရားသခင်အတွက် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ရန် ခက်ခဲမှုကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ သူ တို့ကို သင်ကြားပို့ချပေးသူများသည် ဘုရင့်အစေခံဖြစ်ကြရုံသက်သက်မဟုတ်သည်ကို သင်တို့ မြင်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်ကိုတိုင်က သူတို့သည် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပြီး ရှက်ကြောက် ခြင်းမရှိကြမည်အကြောင်း သွန်သင်ပေးထားပါသည်။ သင်သည် အစာစားသောအခါ ခေါင်းကို ငုံ့လျက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောဖူးပါသလား။ သင်သည် ခရစ်ယာန်မဟုတ်သောသူများနှင့် အတူရှိသောအချိန်တွင်လည်း ထိုသို့လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါသလား။ သင်သည် စားသောက်ဆိုင် ၌ လူများစွာတို့နှင့်အတူ ရှိနေသည့်အချိန်တွင်လည်း ထိုသို့ပင် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါသလား။ သင်သည် ခရစ္စမတ်အကြို၊ စားသောက်ပွဲတွင် ရှိနေပါသလား။ သို့မဟုတ် အပြစ်ကိုကျူးလွန်မိ သဖြင့် အသင်းတော်ဘုရားကျောင်းသွားဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသလား။ သို့မဟုတ် သင်သည် နှစ် သစ်ကူးအချိန်ခါသမယတွင် အသင်းတော်သို့မရောက်ဘဲ ရှိနေပါသလား။ သို့မဟုတ် ဘုရားမဲ့ ပါတီပွဲသို့ တက်ရောက်ပါသလား။ ဤသူငယ်များကဲ့သို့ ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် ယုံ ကြည်ခြင်းနှင့်အစွမ်းသတ္တိလိုအပ်ပါသည်။ သီချင်းထဲရှိစာသားတစ်လုံးကို ကောက်နှုတ်ထားပါ သည်။
ခိုင်မာသော ရည်ရွယ်ချက် ချမှတ်ရဲပါ၊
ထိုအကြောင်းကို လူတိုင်းအား သိစေရဲပါ။
ထိုလူငယ်လေးဦးတို့သည် အမေရိကန်ဧဝံဂေလိများအတိုင်း ရှုပ်ထွေးမှုများဖြင့် တရုတ်ပြည်တွင် အသင်းတော်ကောင်းများ၌သာ ဘုရားကျောင်းတက်လိုကြသည့် အမေရိကန် ထွက် တရုတ်လူငယ်များကဲ့သို့ မဟုတ်ကြပါ။ လုံးဝမဟုတ်၊ လုံးဝမဟုတ်ကြပါ။ သူတို့သည် တစ်ခြားတစ်ဦးဦးက ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်၏စကား နာခံခြင်း ကိုသာ ဦးတည်ကြသည်။ ၎င်းမှာ ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသော ကလေးသူငယ်များဖြစ်ကြပါ သည်။ သူသည် သူတို့ကို ချီးမြှောက်သည်။ သင်သည် ထိုလူငယ်များကဲ့သို့ အလေးအနက် အ သက်ရှင် လျှင် ဘုရားသခင်က ချီးမြှောက်တော်မူလိမ့်မည်။
ယခုတွင် လူငယ်များသည် အခြားစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပြန်ပါသည်။ သူတို့သည် ပထမစစ်ဆေးခြင်းကို မစားမသောက်ခြင်းဖြင့် ကျော်လွှားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က အခြားစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကို ပေးထားပါသည်။ ၎င်းမှာ ဆုတောင်းခြင်းစစ်ဆေးမှု ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်ဘုရင်သည် အိပ်မက်တစ်ခုကို မြင်မက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဆိုလိုရင်းကို သိလိုပါ သည်။ အိပ်မက်သည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သူ၏ပညာရှိများကိုမပြောပြပါ။ အိပ်မက်အ နက်ကို မဖော်ခင် အဘယ်သို့သောအိပ်မက်ဖြစ်သည်ကို ပထမဆုံးပြောပြရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါ သည်။ ထိုသို့မပြောနိုင်လျှင် အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ရန် ဖြစ်သည်။ ဘုရင်က “အိပ်မက်နှင့်အနက်ကို ဖော်ပြကြပါ” ဟုဆိုသည်။ ( ၂း ၆ ) ပညာရှိသောသူတို့သည် သူမေးမြန်းသောအရာကို အဘယ် ပညာရှိမျှ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟု ဆိုကြသည်။ ဤအရာက ဘုရင်ကို အမျက်ထွက်စေ ပြီး ဗာဗုလုန်တွင်ရှိသော ပညာရှိများအားလုံးကို ဖျက်ဆီးရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရင့်အ မိန့်တော်ထွက်လာပြီး သူတို့သည် ဒံယေလနှင့်၎င်း၏မိတ်ဆွေသုံးဦးကို အခြားပညာရှိများနှင့် အတူ အသတ်ခံရန် လိုက်ရှာကြပါသည်။ ဒံယေလသည် ဘုရင့်ထံသို့သွားပြီး အချိန်အနည်း ငယ်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်။ ထို့နောက် အဖြေပေးမည်ဟုဆိုသည်။ ဒံယေလသည် အဘယ် အရာကို လုပ်ဆောင်ပါသနည်း။ သူသည် သူငယ်ချင်းသုံးဦးဖြစ်ကြသော ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အာဗေသနေဂေါထံသို့သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဤလူလေးဦးတို့သည် အတူတကွ ဆုတောင်း ပဌနာပြုကြသည်။ သူတို့က John, Jack, Noah နှင့် Aaron ဟူသော ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ဆု တောင်းသည့် လူငယ်လေးဦးကို အမှတ်ရစေသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ထံ၌ ဘုရားသခင် ၏ သနားခြင်းကရုဏာတော်ကို တောင်းလျှောက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရင်၏လျှို့ဝှက် အိပ်မက်ကို ဖော်ပြရန် ဘုရားသခင်ထံတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ဒံယေလ ၂း ၁၉ ကို ကြည့်ကြပါ စို့။ “ညအချိန်ရူပါရုံတွင် အိပ်မက်ကို ဒံယေလထံ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒံယေလသည် ကောင်းကင် ဘုံရှင် ဘုရားသခင်ကို ကောင်းကြီးပေးထားသည်။” ဒံယေလ ၂း ၂၃ ကိုလည်း ကြည့်ပါ။ ဒံယေ လက “အကျွန်ုပ်ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်အား ပညာအစွမ်းသတ္တိကို ပေးသနား၍၊ အကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသည်အတိုင်း၊ ရှင်ဘုရင်၏အိပ်မက်ကိုဖွင့်ပြတော်္မူသော ကျေးဇူးတော် ကို ချီးမွမ်းထောပနာပြုပါ၏ဟု ဒံယေလမြွတ်ဆိုပြီးမှ၊” ဟုဆိုလေသည်။ မော့ကြည့်ပါ။ ရှင်ဘုရင်က “သင်သည် အိပ်မက်နှင့်၎င်း၏အနက်ကို ဖွင့်ပြနိုင်ပါသလော” ဟုဆိုသည်။ ဒံယေ လက “သင်တောင်းဆိုသောအိပ်မက်အနက်ကို လူပညာရှိများက အနက်မဖွင့်နိုင်သော်လည်း ထိုနက်နဲသောအရာများကို ဖော်ပြနိုင်သည့် ဘုရားသခင်ရှိသည်” ဟုဆိုလေသည်။ ဒံယေလ နှင့် ၎င်း၏မိတ်ဆွေသုံးဦးတို့က ဘုရင်ကြီးအား နက်နဲသောအိပ်မက်နှင့်အနက်ကို ဖွင့်ဆိုပေးခဲ့ ကြပါသည်။ ယခုတွင် အပိုဒ် ၄၇ ကို ကြည့်ပါ။ “ကိုယ်တော်သည် ဤနက်နဲသောအရာတို့ကို ဖွင့်ပြနိုင်သည်ဖြစ်၍၊ အကယ်စင်စစ် ကိုယ်တော်၏ဘုရားသခင်သည် ဘုရားတို့၏ဘုရား၊ ဘုရင် တို့၏အရှင်၊ နက်နဲသောအရာကို ဖွင့်ပြတော်မူသော သခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ယခုတွင် ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါ။ ထို့နောက် ရှင်ဘုရင်သည် ဒံယေလကို ချီးမြှောက်တော်မူ၏။ ဗာဗုလုန်နိုင်ငံတွင် ဝန်ကြီးအရာ၌၎င်း၊ ဗာဗုလုန်ပညာရှိတို့ကို အုပ်စိုးသောဝန်အရာ၌၎င်း ခန့် ထားသည်။ ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အာဗေသနေဂေါတို့ကိုလည်း ဝန်အရာ၌ ခန့်ထားသည်။ ဒံယေလကိုမူ နန်းတော်ဦး၌ ထားတော်မူသည်။
လူငယ်လေးများသည် ဘုရားသခင်ပေးသော ပထမစစ်ဆေးခြင်းကို ဘုရင့်အစားအ သောက်နှင့်စပျစ်ရည်များကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရား သခင်ကို ဦးထိပ်ထားကြသဖြင့် ဤစစ်ဆေးချက်များကို အောင်မြင်ခဲ့ကြလေသည်။
ယခုတွင်လည်း လူငယ်လေးတို့သည် ဒုတိယစစ်ဆေးခြင်းကို အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် အတူတကွတွေ့ဆုံပြီး ဘုရားသခင်က ဘုရင့်အိပ်မက်ကို ဖော်ပြရန် ဆုတောင်းခဲ့ ကြပါသည်။ သူတို့သည် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ကို အမှီတဟဲပြုကြပြီး ဒုတိယစစ် ဆေးခြင်းကိုလည်း အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။
အလွန်ပင်အရေးကြီးလှသည်ဖြစ်၍ ဤအရာကိုပြသရန် ကျွန်ုပ်အချိန်ယူထားပါသည်။ သင်သည် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအနေဖြင့် ကြီးမားသည့်တန်ခိုးဖြင့် ခုန်လွှားနိုင်သည်ဟု တခါတရံ ထင်မှတ်မိသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ ကြီးမားသောတန်ခိုးထဲသို့ “ခုန်ပြန်ကျော် လွှား”မှုမရှိနိုင်ပါ။ သင်သည် ထိုအရာထဲတွင် ႀကီးထွားလာသည်။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရ ပြီးနောက် ကြီးထွားလာသည်။ ယေရှုက ဤသို့ဆိုပါသည်။
သစ္စာမရှိသောသူသည် ကြီးသောအမှု၌လည်း သစ္စာမရှိနိုင်ပေ။” ( လုကာ ၁၆း ၁၀ )
သင်သည် အသင်းတော်တွင်ပြုလုပ်သော ခရစ္စမတ်အကြို၊ နှင့်နှစ်သစ်ကူးအကြို စသဖြင့် သော သေးငယ်သောအမှု၌ သစ္စာရှိလျှင် သာ၍ကြီးသောအမှု၌လည်း သစ္စာရှိပေလိမ့်မည်။
ဤသူငယ်တို့သည် ၎င်းတို့စားသောက်သောအရာ၌ သစ္စာရှိကြသည်။ သူတို့သည် စစ် ဆေးခြင်းကို ကျော်လွှားခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ဆုတောင်းခြင်းတွင် သစ္စာရှိကြသည်။ သူတို့ သည် စစ်ဆေးခြင်းကို ကျော်လွှားကြပြန်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် သူတို့သည် သာ၍ကြီးသောစစ်ဆေးခြင်းကို ကြုံတွေ့ကြသည်။ သူတို့ သည် ဘုရင်၏ရွှေရုပ်တုကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသလား။ သို့မဟုတ် သူတို့သည် အသက်ရှင်လျက် မီးတွင်းထဲ ပစ်ချခြင်းကို ခံခဲ့ကြပါသလား။ သူတို့သည် သေးငယ်သောစစ်ဆေးခြင်းကိုပင် အောင်မြင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် သူတို့သည် သတ္တိရှိလာကြပါသည်။
“အကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်သည် မီးလောင်လျက်ရှိ သောမီးဖိုထဲက အကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်လွှတ်နိုင်တော်မူ၏။ ကိုယ် တော်၏လက်မှလည်း ကယ်လွှတ်နိုင်သည်။” ( ဒံယေလ ၃း ၁၇ )
သူတို့က ဘုရားသခင်သည် ကြီးမားသောစစ်ဆေးမှုကြီးဖြစ်သည့် မီးလျှံထဲက ကယ်နှုတ်တော် မူမည်အကြောင်းကို သေးငယ်သောစစ်ဆေးခြင်းကို အောင်မြင်ခြင်းဖြင့် သင်ယူလေ့လာခဲ့ကြပါ သည်။
သူတို့သည် ဘုရင်ကြီး၏အသေသတ်ခြင်းမှလည်း အလေးအနက်ထားဆုတောင်းခြင်း ဖြင့် လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဘုရင်ကြီးက ဒံယေလအား ခြင်္သေ့တွင် ထဲသို့ပစ်ချသောအချိန်တွင် ဒံယေလသည် လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ခြင်္သေ့၏ နှုတ်ကို ကောင်းကင်တမန်များအား ပိတ်စေခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ပြင်း ထန်သောမီးထဲ သူတို့နှင့်အတူရှိပြီး ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ထိုကောင်းကင်တမန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ဒံယေလ ခြင်္သေ့တွင်းထဲပစ်ချစဉ်တွင် ထိုခြင်္သေ့တွင်းထဲ၌ ရောက်နေ ပါသည်။ သူသည် နတ်ဆိုးများကိုတိုက်လှန်ပြီး ကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်းကိုပြသပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “သင်၏ဘုရားသခင်ကို ရင်ဆိုင်တွေ့ဖို့ အသင့်ပြင်ထားပါ” ဟုဆိုသည်။ သင် သည် ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိလျှင် နတ်ဆိုးများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး သခင်ဘုရားကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်။
သင်သည် အချိန်တန်သောအခါ ကြံ့ကြံ့ခံရပ်န်ိုင်ဖို့ ယခုတွင် သင်တန်းတက်ရောက် လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် မီးထဲက လွတ်မြောက်မည်ဆိုလျှင် များစွာပေးဆပ်ရပါ မည်။
သို့ဖြစ်သောကြောင့် သင်သည် သင်တန်းကို ယခု စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း၌ မဟုတ်၊ ယခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသောသူအဖြစ်၌ ချက်ချင်း ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ မဖြစ်နိုင်ပါ။ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများရှိပါသည်။ ဒေါက်တာ Chan က သူ့ဇနီးသည်၊ မစ္စ Hymers တို့အကြောင်း ပြောပြသည်ကို နားထောင်ပါ။ ဒေါက်တာ Chan က “မစ္စ Hymers သည် နေ့ချင်းညချင်း ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားသောသူဖြစ်မလာပါ။ သူသည် သခင်ဘုရားအစေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ သစ္စာရှိစွာ ထမ်းဆောင်ပြီးမှသာ ရင်ကျက်လာပါသည်။ သူမသည် လူငယ်အမျိုးသမီးပီပီ သူမ၏အသက်တာကို အသင်းတော်လုပ်ငန်းတွင် အပ်နှံပြီး လုံး၀ နောက်ပြန်မလှည့်ပါ။ ဤအရာကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူမအသက်တာကို ကြီးမား စွာ အသုံးပြုခဲ့ပါသည်” ဟုဆိုသည်။ သူမသည် အသက် ၁၆ နှစ်မှစ၍ အသင်းတော်အတွက် ၎င်း၏အကောင်းဆုံး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ယခုတွင် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာ သောအခါ သူသည် ယုံကြည်ခြင်း၌ ကြီးမားသောသူဖြစ်လာသည်။ သင်သည် သင်လုပ် ဆောင်ရသည့် သေးငယ်သောအမှု၌ပင် အလေးအနက်ထား၍ သစ္စာရှိသောသူမဖြစ်လျှင် သင်သည် ရုတ်တရက်ပင် ဝိညာဉ်ရိတ်သိမ်းသူနှင့် အနာဂတ်တွင် ဆုတောင်းအားကြီးသောသူ လည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒံယေလနှင့်သူငယ်ချင်းသုံးဦးအတွက် ဖြတ်လမ်းနည်းမရှိပါ။ သင့်အတွက်လည်း ဖြတ် လမ်းနည်းမရှိပါ။ ခရစ်တော်အထဲက ဆင်းရဲဒုက္ခခံလျက် အလေးအနက်ထားကာ ယခုဝင် ရောက်ပါ။ သင်သည် စတင်သည့်အချိန်တွင် ပြင်းရိနေလျှင် သင်သည် နောက်ပိုင်းတွင် ကြီးမားသောခရစ်ယာန်မဖြစ်လာနိုင်ပေ။ ခရစ်တော်အထဲသို့ဝင်ရောက်ဖို့အတွက် အစပိုင်းတွင် ရုန်းကန်မှုများဖြင့် စတင်လိုက်ပါ။ လူတစ်ဦးက “ကောင်းစွာစတင်ခြင်းသည် ထက်ဝက်ပြီးစီး သည်” ဟုဆိုသည်။ မစ္စ Hymers သည် အပြစ်ထဲက လှည့်ပြန်ပြီး ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ကြားသိသောအချိန်၌ လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာ Judith Cagan သည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ Kreighton Chan, မစ္စ Melissa Sanders, မစ္စတာ Ben Griffith တို့သည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့သည် ယခုအချိန်၌ ခိုင်မာသောခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြပါသည်။ မိန်းမကြီးတစ်ဦးက သူတို့ ပြောင်းလဲလာတာ မြန်လှချည်လားဆိုပြီး တအံ့တအောဖြင့် ကျွန်ုပ်ကို ကြည့်မိသည်။ သူမ ကိုယ်တိုင်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါသည်။ “သူတို့သည် အဘယ့်ကြောင့် အလျှင် အမြန်ပြောင်းလဲလာကြသနည်း” ဟု မေးမြန်းသည်။ သူတို့သည် အလေးအနက်ထားသည်အ တိုင်း သင်သည် အလေးအနက်မထားပေ။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်သည် မိုက်မဲ နေလျှင် သင်သည် အစပိုင်းတွင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင်ဝင်စားဖို့ ကြိုးစားရုန်ကန်ခြင်းမ ရှိပါ။ သင်သည် ပျော့ညံ့၊ အားနည်းသော နယူးဧဝံဂေလိအသင်းတော်များသို့တက်ရောက်ခြင်း ဖြင့် ပျက်စီးသော တရုတ်လူငယ်များကဲ့သို့ သင်သည်လည်း အားနည်းသောနယူးဧဝံဂေလိအ ဖွဲ့ထဲပါဝင်လာပေလိမ့်မည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “ခရစ်တော်၏ကောင်းသောစစ်သူရဲကဲ့သို့ ခက်ခဲ မှုများကိုသည်းခံလော့” ဟုဆိုလေသည်။ ( ၂ တိ ၂း ၃ ) ဒံယေလကဲ့သို့ဖြစ်ဝံ့ပါ။ သီချင်းသီဆို ကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်စိုးစံလိုလျှင်၊ အမှန်တကယ် တိုက်ခိုက်ရမည်၊
ပင်ပန်းဆင်းရဲသည်းခံမည်၊ နာကျင်ခြင်းကို ခံနိုင်မည်၊
(“ကျွန်ုပ် ကားတိုင်တော်စစ်သားလား?” ဒေါက်တာ Isaac Watts, ၁၆၇၄-၁၇၄၈ ).
“ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆိုင်၍ ကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုပြုလော့။ ထာဝရအသက်ကို ကိုင်ယူလော့။” ( ၁ တိ ၆း ၁၂ )
ပျင်းရိသော နယူးဧဝံဂေလိတို့သည် အသင်းသားကောင်းများ မည်သည့်အချိန်တွင်မျှဖြစ်ကြ မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့က ၎င်းတို့၏အားနည်းသောဧဝံဂေလိဝါဒကို မှားယွင်းကြောင်းလက်မခံ ခြင်းက လက်မခံကြပေ။ ထို့ကြောင့် နယူးဧဝံဂေလိများက ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ခဲယဉ်းသည်။ သူတို့သည် ပထမအကြိမ် ဧဝံဂေလိကြားချိန်တွင် လုံး၀ မပြောင်းလဲတတ်ကြပါ။ သူတို့က ၎င်း တို့၏ဘာသာရေးလမ်းစဉ်သည် မှားယွင်းကြောင်း လက်မခံမှီတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ခိုက် နေရပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သာလျှင် သူတို့သည် အသင်းသားကောင်းမဖြစ်နိုင်ကြပေ။ လုံး၀၊ လုံး၀၊ လုံး၀ မဖြစ်နိုင်ကြပေ။ သင်သည် ခရစ်တော်အတွက် သင့်လမ်းကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ပျင်းရိနေ လျှင် ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌ ကောင်းမြတ်သောအရာများကိုလည်း တိုက်ခိုက်ဖို့ လုံး၀ဖြစ်နိုင် မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်က ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း ပြောဆိုနေပါ သလား။ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်မပြောပါ။ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းသာ ပြောဆိုနေပါသည်။ သင်၏သံသယနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုများကို တိုက်ခိုက်စေသည့် ကျေးဇူးတော် အကြောင်းကို ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးသော ယုံကြည်ခြင်း အကြောင်းကို ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာက ခရစ်တော်၏အသင်းတော်အတွက် ကောင်းသောအရာကို တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ R. A. Torrey က တရားဒေသနာခေါင်းစဉ်အဖြစ် “အလိုရှိသည့်၊ တိုက်ခိုက်နေသောခရစ်ယာန်များ” ဟု ဟော ကြားခဲ့ပါသည်။ အစမှ စတင်သူဖြစ်ပါ စေ။ သင်သည် ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခြင်း တွင် ပျင်းရိနေလျှင်၊ သင့်အသက်တာအတွက်လည်း ပျင်းရိနေပေလိမ့်မည်။ “အလိုရှိသော၊ တိုက်ခိုက်နေသောခရစ်ယာန်များ၊” ဤအရာမှာ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ရှိသော တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းအတွက် ပျင်းရိနေ လျှင် အခြားအသင်းတော်ကိုသွားပါ။ ထိုနေရာတွင် အားနည်းချို့တဲ့သော ဧဝံဂေလိအသင်း တော်များစွာရှိကြပါသည်။ အခြားနေရာသို့သွားပါ၊ အခြားတစ်နေရာသို့သွားပါ။ အခြားတစ်နေ ရာသို့သွားပါ။ အခြားတစ်နေရာသို့ ထွက်သွားပါ။
သို့ရာတွင် ခေတ္တခဏစောင့်ဆိုင်းပါ။ ကျွန်ုပ်အားဖြင့်မဟုတ်ပါ။ သင့်ကို အမှန်တကယ် မသွားစေလိုပါ။ သင်သည် ဤနေရာတွင်နေထိုင်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေလိုပါသည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်ပြောဆိုသောအရာကို အသေအချာနားထောင်ပါ။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသေး ဘူးဆိုလျှင် ဤသည်မှာ တရားဒေသနာ၏အရေးကြီးဆုံးသော အခန်းကဏ္ဍပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု သင့်အားပြောဆိုသောအရာပေါ်တွင် စိတ်ကိုထားပါ။ သင်သည် အရင်က နားမထောင် ဘူးသည်ဖြစ်၍ ဤအရာကို သေချာနားထောင်ပါ။
ရှင်ဘုရင်သည် လူငယ်သုံးဦးကို ပြင်းစွာလောင်သောမီးထဲသို့ ချပစ်လေသည်။ သူတို့ သည် မျှော်လင့်ချက်ဆုံးပါးသွားကြသည်။ သင်သည် ထိုသို့ခံစားနေပါသလား။ သင်သည် မျှော် လင့်ချက်မရှိသောအခြေအနေတွင်ရှိနေပါသလား။ သင်သည် မိမိကိုယ်ကို မကယ်တင်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေပါသလား။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည့်မျှော်လင့်ချက်အလုံးစုံကို စွန့်လွှတ်ခဲ့တာပါ။ “ကျွန်ုပ်သည် ဒေါက်တာ Chan သို့မဟုတ် မစ္စတာ Griffith သို့မဟုတ် Judy Cagan သို့မဟုတ် မစ္စ Hymers များကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ သင်က မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသူဟု ခံစားရပါသည်။ သင်သည် ငရဲကျပြီး မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ဖို့ အဘယ်အမှုကိုမျှ မတတ်နိုင်တော့ဟု ထင်မိပေ မည်။ သို့ရာတွင် ခဏစောင့်ပါ။ ဘုရင်သည် မီလျှံထဲသို့ကြည့်ရှုသောအခါ အခြားသုံးဦးကိုသာ မမြင်တော့ပါ။ ရှင်ဘုရင်သည် လူလေးဦးကို မီးလျှံထဲတွင် “မတုပ်မနှောင်ဘဲ မီးထဲ၌သွားလာ၍ ဘေးဥပဒ်နှင့်ကင်းလွတ်သည်ကို မြင်ခဲ့သည်။” ( ဒံယေလ ၃း ၂၅ ) Spurgeon ပြောဆိုသည်ကို လက်ခံပါသည်။ မီးလျှံထဲက လေးယောက်မြောက်သည် ယေရှု၊ ဘုရားသခင်၏လူ့ဇာတိမခံယူ သေးသော ယေရပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် သူတို့နှင့်အတူ မီးထဲတွင် ရှိနေခဲ့သည်။ ယေရှု သည် ဤလူငယ်လေးဦးကို မီးလျှံထဲက ကယ်နှုတ်ခဲ့ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက သူတိုပကို လောင်ကျွမ်းရန် “မီးသည် တန်ခိုးမရှိ” ဟုဆိုပါသည်။ (ဒံယေလ ၃း ၂၇) ယေရှုသည် သူတို့နှင့် အတူရှိနေ၍ ယေရှုသည် သူတို့ကို မီးနှင့်ငရဲထဲမှ ကယ်နှုတ်ခဲ့ပါသည်။
ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ ယေရှုသည် သင့်ကိုလည်း ကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။ သူသည် သင့်ကို သနားတော်မူသည်။ သူသည် သင့်ကိုချစ်သည်။ သင့်ယုံကြည်ခြင်းသည် မည်မျှပင် သေးငယ်နေပါစေ၊ ယေရှုသည် တန်ခိုးကြီးမားပါသည်။ ယေရှုသည် သင့်ဘက်၌ရှိနေပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ထိုသို့ပင်ဆိုပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “ယေရှုသည် အပြစ်ရှိသောသူတို့ကို ကယ်တင်ဖို့ရန် ဤလောကသို့ကြွလာသည်။” ( ၁ တိ ၁း ၁၅ )
သင်သည် မည်မျှလောက်မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသည်ကို ဂရုစိုက်မနေပါ။ သင်သည် မျှော် လင့်ချက်မဲ့သည်ဟု ခံစားလေလေ ပိုကောင်းလေလေဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အ ကြောင်းမှာ သင်သည် ယေရှုကို ကယ်တင်ခြင်းအမှုအလုံးစုံ လုပ်ဆောင်စေရန် အဆင်သင့်ဖြစ် စေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် မိမိကိုယ်ကို မကယ်တင်နိုင်ပါ။ သင်မလုပ်ဆောင်နိုင် သည်ကို သင်ကိုယ်တိုင်ကသိသည်။ သင်သည် မကောင်းသောသူ၊ သို့မဟုတ် ခွန်အားဗလ မကြီးမားသူဖြစ်ကြောင်းကို သိသည်။ ကောင်းပါပြီ။ ယေရှုသည် သင်၏ခက်ခဲသောအခြေအနေ တွင် လေးယောက်မြောက်ဖြစ်ပါစေ။ သူ့ကုိ ကယ်တင်စေပါ။
သင်က “လုံလောက်သောယုံကြည်ခြင်းမရှိ” ဟုဆိုပေမည်။ ကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့ရာတွင် ယေရှုက မည်သို့သောနည်းလမ်းမျိုးနှင့်မဆို ကယ်တင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် မျှော် လင့်ချက်အလုံးစုံကို စွန့်လွှတ်သောအချိန်၌ ယေရှုက ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်ထံ သို့လာပြီး ပြင်းစွာသော သံသယနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲက ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်ရန် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ယနေ့ညတွင် ယေရှုသည့် သင့်အနားမှာ ရှိပါသည်။ သူသည် သင်၏ပြင်းစွာသော သံသယနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းများထဲက ကယ်တင်ရန် ကြွဆင်းလာပါသည်။ သူသည် သင့်ကို ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကို ပေးထားသည်။ သင် က ထိုအရာမယုံကြည်သည်ကို သိသည်။ သို့ရာတွင် သူ့ထံသို့ အရောက်သွားပါ။ သူသည် သင့်အနားတွင် ရှိပါသည်။ မိမိကိုယ်ကိုမကြည့်ပါနှင့်။ ယေရှုကိုသာကြည့်ပါ။ သေငယ်သောယုံ ကြည်ခြင်း၊ ဘာမျှမရှိသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယုံကြည်ကိုးစားပါ။ ကြီးမားသောအရာကို မ တောင်းဆိုပါ။ အနည်းငယ်သော ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ သူသည် သင်နှင့်အတူ ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြားတွင် ရှိနေပါသည်။ အနည်းငယ် ယုံကြည်ကိုးစားပါ။ ကောင်းသွားပါ လိမ့်မည်။ သင်သည် ယုံကြည်ရန်ပင် မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါ။ သူသည် သင့်ကို ကယ်တင် မည်အကြောင်း ကျွန်ု္ပ္သိပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းက သင့်ကို ကူညီပါရစေ။ ယေရှုကို ယုံကြည်လျက် အရာအားလုံး ကောင်းမွန်စေလိမ့်မည်။ “ဒေါက်တာ Hymers က ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်မည်ကို ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်းအုပ်ကို စိတ်ချသလို ယေရှုကို လည်း ယုံကြည်စိတ်ချပါသည်။” “ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသာယုံကြည်ပါ၊ ယခုယုံကြည်ပါ။” သူ သည် သင့်ကို ကယ်တင်မူမည်။ သင့်ကို ကယ်မူမည်။ ယခုကယ်တင်မည်။” “သို့သော်” သင်က “ငါ့ကို အရင်က မကယ်ဘူး” ဟုဆိုသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ဟန်တူသော်လည်း ယခုကယ်မူမည္။
သင်၏အပြစ်မှကယ်ခြွတ်မည်၊ ယခု ကယ်ခြွတ်မည်။
( “ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသာယုံကြည်ပါ။” John H. Stockton, ၁၈၁၃-၁၈၇၇ ).
သင်၏အားနည်းလျက်ရှိသော နယူးဧဝံဂေလိဘာသာတရားထဲက ထွက်လာခဲ့ပါ။ ယခု ထွက်လာခဲ့ပါ။ ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီး သူ့အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင် တွင်သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့်လည်းကောင်း အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရလိမ့်မည်။
“ဒံယေလကဲ့သို့ဖြစ်ရဲသည်"၊ (Philip P. Bliss, ၁၈၃၈-၁၈၇၆ ရေးစပ်၍ ဒေါက်တာ Hymers က ပြင်ဆင်ပါသည်။ )